Farmaajo oo farriin u diray shacabka Soomaaliyeed + Sawirro - Caasimada Online
Home Warar Farmaajo oo farriin u diray shacabka Soomaaliyeed + Sawirro
Farmaajo oo farriin u diray shacabka Soomaaliyeed + Sawirro
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday ee Maxamed Cabdullahi Maxamed (Farmaajo) ayaa maanta Ubax dhigay taallada dhagax-tuur, si loogu maamuso halgameyaashii naftooda u soo huray Xorriyadda Gobollada Waqooyi.
Madaxweynaha ayaa shaaca ka qaaday in halgan adag loo soo maray madax-banaanida dalkeena, isla-markaana taalada Dhadax-tuur ay tahay astaan qaran oo u taagan xusuusaha lama illaawaanka ah ee ay leeyihiin guud ahaan Ummadda Soomaaliyeed.
Sidoo kale madaxweynaha ayaa farriin u diray shacabka Soomaaliyeed, isaga oo ugu baaqay inay adkeeyaan midnimada iyo wadaniyada, si looga gudbo caqabadaha jira.
“Madaxweynaha Jamhuuriyadda oo muujinaya sharafta iyo qiimaha ay inaga mudan yihiin geesiyaashii Soomaaliyeed ee u soo halgamay Xorriyadda ayaa shacabka Soomaaliyeed ku adkeeyay midnimada, waddaniyadda, wadajirka iyo isku duubni sal adag leh, si loo xaqiijiyo dhaxalkii ay ka tageen ee ilaalinta gobannimadeenna,” ayuu yiri madaxweyne Farmaajo.
Halkan hoose ka aqriso warsaxaafadeedka:-
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maamuusaya halgameyaashii Soomaaliyeed ee naftooda iyo dhiiggooda u huray Xorriyadda Gobollada Waqooyi iyo guud ahaan halgankii gobannimo doonka ee Dalka ayaa ubax dhigay taallada Dhagax-tuur ee magaalada Muqdisho.